Bulsho Adhi Jarmal Buluug ah: Xogta Noocyada Dhammaystiran - Taranka
Bulsho Adhi Jarmal Buluug ah: Xogta Noocyada Dhammaystiran
Waxaa laga yaabaa inaad aragtay tan-dhaqameedka (oo leh salka madow) ee Jarmalka Shepherd Dog, laakiin waligaa miyaad aragtay Adhijirka Jarmal ee Buluuga ah ee dhifka ah?
Eeyahaani waa kuwo cusub oo ku soo kordhay qoyska reer Jarmalka ee Shepherd, oo dhawaan uun loo aqoonsaday inay yihiin eey saafi ah heerka caadiga ah.
Eeyyaha reer guuraga ah ee loo yaqaan 'German Shepherd Dogs' waa kuwo ay jecelyihiin dadka la kulma oo dhan, iyagoo jecel dabeecadda isla markaana si buuxda isugu dhiibaya milkiilahooda.
Maxay tahay in laga ogaado waxa ku saabsan Bulshadda Buluugga ah ee loo yaqaan 'German German Shepherd Dog' iyo sidee ayey uga duwan yihiin tan GSD-da caadiga ah?
Maqaalkani wuxuu bixinayaa hage dhammaystiran oo daboolaya wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Blue GSD.
Soo-koobidda Tilmaame-yaqaanka Buluug Jarmal ee Buluugga ah
Cabir 24-26 inji (lab) iyo 22-24 inji (dumar)
Miisaanka 65-90lb (lab) iyo 50-75lb (dumar)
Nolosha qofka 9 - 13 sano
Nooca Taranka Daajinta
Ujeedo Shaqaynta / Wehel
Ku Haboon Milkiileyaal Ey Khibrad leh (oo ay ku jiraan Qoysaska)
Kala duwanaanta Midabka Buluug
Dabeecad Isku kalsoon, Geesi, Caqli, Daacad, Is-Hubin
Magacyo Kale Adhijirka Jarmalka, GSD
Waa maxay Adhijir Jarmal Buluug ah? Macluumaadka Eeyaha
Buluug Adhiyaha Jarmalka Jarmalka
Dabeecadda Adhijir Buluug Jarmal ah
Daryeelka Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka
Muuqaalka Adhi-Buluug Jarmal Buluug ah, Coat iyo Arooska
Eygii adhijirka ahaa ee Buluugga ahaa ee Buluugga ahaa ee buluugga ahaa.
Adhijirka Jarmalka ayaa markii ugu horreysay lagu arkay Ameerika horraantii 1900-meeyadii, waxayna ahaayeen kuwo si deg deg ah loo garaacay, tababarkooda iyo dabeecadooda daacadnimo darteed.
Caan ahaantooda ayaa qaadatay qashin intii lagu jiray 1940s iyo 50s sababtoo ah naceybka Jarmalka ka soo horjeedka. Isku day lagu doonayo in lagula dagaallamo tan, magacoodu wuxuu ahaa si kooban loogu beddelay Alsatian . Iyada oo ay taasi jirto, Eyga Shepherd Dog ayaa hadda si waalli ah caan ugu ah qoysaska waana eeyga labaad ee ugu caansan Ameerika.
Buugga Asalka ah ee Jarmalka 'Shepherd Stud', waxaa lagu xusay inay jiraan afar iskutallaabood oo yerooyin ah oo ku jira xarigga dhiigooda!
In kasta oo xaqiiqda ah in Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka asal ahaan loo bahdiyey eey xoolo dhaqato ah, iyadoo hoos u dhac ku yimid maaraynta xoolaha dhaqameed, haddana waxay caan ku yihiin doorar kale oo badan, oo ay ka mid yihiin:
Eyga Caawinta Naafada
Raadinta iyo Samatabbixinta Eyga
Booliska iyo Doorka Milatari
... ama xitaa kaliya a jacaylka iyo daacadnimada xayawaanka qoyska !
In kasta oo asal ahaan madow iyo buluug ah, Eyga Shepherd Dog uu imika ku yimaaddo kala duwanaansho badan, oo ay ka mid yihiin caato, cawl, caddaan iyo dabcan, buluug!
Lama oga goorta uu soo muuqday adhijirka buluuga ah ee reer Jarmal , laakiin weli waa kala duwanaansho midab naadir ah oo taranka.
Marki uguhoreysay Jarmalka dabayaaqadii 1800meeyadii, Eyga Shepherd Dog wuxuu leeyahay taariikh gaaban.
Caddeymaha DNA-da ayaa soo jeedinaya in eeyaha asalka ah ee adeegsaday (Max von Stephanitz) ay u badan tahay inay yihiin eeyo dhaqanaya asal ahaan Faransiiska iyo Talyaaniga.
von Stephanitz wuxuu rumeysnaa in eeyadu ay shaqeynayaan, laakiin ma uusan helin nooc kasta oo qanciya baahidiisa.
Sidaa awgeed, wuu iibsaday eey magaciisu yahay Hektor Linksrhein yaa soo koobay waxa von Stephanitz raadinayay.
Eygan, oo loo beddelay Honrard von Grafrath, wuxuu noqday kii ugu horreeyay abid ee Jarmalka loo yaqaan 'Shepherd Dog'. Taas awgeed, dhammaan GSD-yada casriga ah waxay ka yimaadeen safkiisa (iyadoon loo eegin midabkooda).
GSD waa xulasho weyn dhammaan milkiilayaasha eyda firfircoon, oo ay ku jiraan qoysaska, kali iyo lamaanayaasha.
A Buluug Jardiim Buluug ah ayaa ku kacaya inta udhaxeysa $ 1,200 - $ 1,500 USD . Eeyahaani way ka dhif yar yihiin walaalahooda taangiga madow iyo tan madow (yacni muuqaalka dhaqameed ee GSD).
Maaha in dad badan oo ka mid ahi ay u soo baxaan midabkan u gaarka ah, iyaga oo dooranaya halkii ay ka iibin lahaayeen kala duwanaanta midabka tan badan ee caanka ah taas oo ka dhigi karta helitaanka abuur wanaagsan mid adag.
Adhijirka Jarmalku waa eeyo waaweyn, waxayna yeelan karaan cabbirro waaweyn oo qashin ah oo celcelis ahaan sideed eey ku jiraan qashin; laakiin tani waxay noqon kartaa meel u dhexeysa 1 iyo 15 eey.
Adhijirka Reer Jarmal ee qaangaarka ah, oo ah kuwa la caddeeyay eeyaha, ayaa laga yaabaa inay ku iibiyaan inta udhaxeysa $ 7,000 iyo $ 9,000 USD.
AKC-du waxay haysaa liisaska AKC-ga la aqoonsan yahay kaas oo ka dhigaya mid fudud in laga helo abuure lagu kalsoonaan karo deegaankaaga. Haddii aad doorbideysid inaad korsato, Naadiga Adhijirka Jarmalka ee Ameerika wuxuu leeyahay liisaska badbaadada iyo xarumaha samatabbixinta ee ka jira waddanka oo dhan.
Adhijirka Jarmalka waa eeyga labaad ee ugu caansan Ameerika, tan waxaa ka mid ah buluug sidoo kale, mana aha wax adag in la arko sababta!
Eeyahaas leeyihiin shaqsiyaad rafcaan leh , oo si dhakhso leh ayey u noqdaan kuwa ugu cadcad qof kasta oo la kulma. Iyagu waa ardayga ugu fiican, si fiican u la qabsan kara kuna wanaagsan wax walba.
Eeyyaha Buluugga ah ee Jarmalka 'German Shepherd Dogs' waa eeyo si aan caadi ahayn u daacad ah, oo aan wax kale ka jeclayn inay ka farxiyaan milkiilahooda
Si kastaba ha noqotee, milkiilahooda tayada leh ee ka farxiya ayaa ka dhigi kara iyaga si aan caadi aheyn walaac, ama waxyeello, markii keligood looga tago muddo dheer.
Tan waxaa lagu daaweyn karaa tababar wanaagsan iyo is dhexgal bulsho (inbadan oo ka dib)
Waxaa muhiim ah in la ogaado in Blue Shepherds ay la wadaagi karaan milkiilayaashooda isla markaana ay xoogaa ka fogaan karaan shisheeyaha.
Tani waxay ka timaaddaa maalintoodii adhigga, halka ay ahaan lahaayeen ilaaliya adhigooda , oo aan lahayn adhigan astaamahan waxaa loo wareejin karaa aadanaha, gaar ahaan carruurta yaryar.
In kasta oo ay tahay tayo aan la jeclayn, ayaa lagu maamuli karaa, iyadoo lala yeelanayo bulsheed badan laga soo bilaabo da 'yar. Ku dhiirigali ardaygaaga inuu si tartiib ah ula ciyaaro dadka kale, adoo siinaya xoojin badan oo wanaagsan.
Iyada oo leh dabeecad la yaqaan oo xasilloon, Blue German Shepherds waa xulasho caan ah oo loogu talagalay dadka ka socda dhammaan qaybaha nolosha.
Iyaga ayaa xulasho weyn u ah qoysaska maadaama eeyahaani ay si wanaagsan ula qabsadaan carruurta iyo xayawaanka kale.
Cunuggan eey sidoo kale wuxuu ku habboon yahay kali kali iyo lamaanayaasha la siiyay waad la socon kartaa shuruudaha jimicsiga sare!
Eyga Shepherd Dog waa wehel aamin ah oo daacad ah.
Hagaha 1,200 kalori
Adhijirka Buluugga ah ee Buluugga ah waa mid aad u adkeysi badan isla markaana ku fiicnaan doona dhammaan saddexda nooc ee cuntooyinka soo socda:
Wax kasta oo aad quudiso, waxay u baahan doonaan qiyaastii 1,200 kaloori maalintii, oo ay ku jiraan 18-24% borotiin ah iyo 7-10% dufan. Ku dhaji hal quudin oo tayo sare leh una isticmaal si joogto ah isla waqtiga cuntada.
Ku dhaji hal nooc oo ah cuntada iyo cuntada, isbeddelada cuntada ayaa kicin kara caloosha eyga; gaar ahaan sida eey.
Barootiintu aad ayey muhiim u tahay xaalada muruqa adhijirkaaga buluugga ah iyo dufanka ayaa lagama maarmaan u ah ilaalinta dharkaaga GSDs jilicsan.
Qaar ka mid ah Adhijirrada caanka ah, (tusaale ahaan. Jade Sable GSD ), Waxay ku fiicnaan kartaa quudinta cayriin, ama cuntada BARF.
Tusaale wanaagsan oo ah cunno cayriin oo caafimaad leh hadana nafaqo leh eeygaaga waa kalluun ceyriin. Hilibku waa caato oo borotiin buu hodan ku yahay, Omega-3 aad ayuu faa'iido ugu leeyahay jaakadooda.
Buluugga GSD waa eey aad u firfircoon, oo u baahan ugu yaraan 120 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta.
Daqiiqado 120 daqiiqo
Adhijirka Buluugga ah ee Buluugga ah kama duwna tan Shepherd-ta dhaqanka (marka laga reebo midabkooda), sidaa darteed xaqiiqda loo soo saaray inay shaqeeyaan, eeyaha Jarmalka ee Shepherd waxay u baahan yihiin jimicsi badan.
Markaad weynaato, sida adhijirrada badankood , eeyahaas firfircoon waxay u baahan yihiin qiyaastii 120 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii.
Inta ay korayaan, waxay u baahan yihiin jimicsi aad u yar, ilaa 5 daqiiqo bil kasta oo noloshooda ka mid ah (tusaale ahaan, a 9-jir German Shepherd Puppy waa in la lugeeyaa ilaa 45 daqiiqo maalintii ).
Fikrad ahaan, socodkani waa inuu ku faafaa maalinta oo dhan, maadaama GSD aysan sifiican ugu fiicneyn laqabsashada.
Helitaanka qalin ku duugan aagga bannaanka, ama beero, ayaa laga yaabaa inay ka caawiso baahidooda jimicsiga sidoo kale, maxaa yeelay waxay u oggolaan doontaa eyga inuu is-jimicsado, laakiin, tani maahan beddel ku habboon socodka wanaagsan!
Waxaad sidoo kale rabi kartaa inaad isku daydo inaad eygaaga dabaasho, orod ama socod raacisid.
Eeyaha aan helin jimicsi ku filan ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo wax burbura jahwareer awgiis.
Haddii mararka qaarkood aad maqnaan doontid waqti dheer, isku day inaad waxyaabo ku isticmaasho guriga si aad ugu raaxaysatid, sida kong.
Adhijirka reer Jarmal uma baahna oo kaliya kicinta jirka, laakiin waxay ubaahantahay maskax badan.
Isku day ciyaaro sida dhuumashada iyo raadinta , qarinta alaabta carruurtu ku ciyaarto, cuntada ama xitaa naftaada si aad u madadaaliso. Cayaaraha sida dhuumashada iyo raadintu waxay sidoo kale waxtar u yeelan karaan dhiirigelinta eeygaaga si uu ugu dhex milmo xirfadahooda dabiiciga ah, adoo adeegsanaya dhegahooda iyo sankooda si ay u helaan abaalmarintooda halkii ay ka arki lahaayeen indhahooda.
Adhijirka Buluugga ah ee Buluugga ah waa eey caqli badan - ma annagaa sheegnay taas ?!
Waxay ku dhasheen inay shaqeeyaan markaa waxay leeyihiin waddo dabiici ah oo ay wax ku bartaan, sidaa darteedna dhiirigelin fara badan tababbarku waa inuu noqdaa neecaw.
Sidii hore loo soo sheegay, Eyda Shepherd Jarmalka waa eeyo aad u daacad ah iyo sidaa awgeed waxay u muuqdaan kuwo ku xanuunsanaya walaac kala soocid Tan waxaa lagu daaweyn karaa da 'aad u da' yar waana in wax laga qabtaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho gurigaaga eey cusub:
Iskuday inaad ka tagto eeygaaga keligaa muddo aad u gaaban (oo aan ka badnayn soddon ilbiriqsi) adoo ammaanaya iyo xoojin badan soo celinta
Toddobaadyada soo socda ayaa iskudaya inaad tan ka shaqeyso illaa waqti dheeri ah oo dheeri ah illaa laga tagi karo iyadoo aan la ilaalin karin waqtiga
Tilmaamo badan oo tababar ayaa kugula talin doona inaad u isticmaasho habka tababarka ku saleysan xukunka oo ay la socdaan Shepherd Dog Jarmal.
Si kastaba ha noqotee, farsamadan ayaa taariikh leh oo dhab ahaantii saameyn xun ku yeelan doonta eygaaga. Hababkani waxay ku tiirsan yihiin cabsi gelin iyo cabsi taas oo culeys weyn ku abuuri karta eygaaga oo xitaa ku abuuri karta xiriir xun milkiilaha!
Welwelka ugu weyn ee caafimaad ee loo qabo Adhijirka Jarmalka Buluugga ah ayaa ah 'dysplasia hip'.
Tani waa qaabka aan caadiga ahayn ee sinta misigta, taasoo keenta burburka carjawda iyo xanuun markaad dhaqaaqayso. Tan waxaa lagu daaweyn karaa daawada anti-bararka laakiin xaaladaha aadka u daran tani waxay u baahan tahay qalliin si loo saxo.
Taranka xulashada iyo ku-dhalashada 'GSDs' oo laga soo qaado hal xarig oo dhiig ah, ayaa sababay arrimo hidde iyo is-beddello la xiriira taranka:
Myelopathy Degenerative, waa hoos u dhac, aan xanuun lahayn oo ku dhaca laf-dhabarka, aakhirkana waa loo dhintaa.
Eeyaha Shepherd eeyaha sidoo kale waxay halis ugu jiraan inay horumar yeeshaan Cilladaha Wadnaha ee Dhalashada :
Cudurka Aortic Stenosis
Qaar ka mid ah welwelka caafimaad ee yar yar ee haysta Adhiyaha Jarmalka waxaa ka mid ah:
Panosteitis (oo loo yaqaan 'xanuunka sii kordhaya'), xaaladani waa mid gaaban oo noole oo lagu xusay dhicisnimadeeda badanaa ku dhacda eeyaha da'doodu tahay 5 ilaa 18 bilood. Xaaladdan waxaa lagu daaweyn karaa daawo laakiin sida caadiga ah iskiis ayey u xallisaa mar haddii eygu weynaado.
Pannus waa xaalad cudur is-difaac ah oo saameysa isha. In kasta oo xaaladda aan la daaweyn karin, qabashada iyo daaweynta Pannus goor hore ogolaanaya in cudurka la maareeyo .
Hemophilia oo ah xaalad hidde ah oo dhiigga ka dhigaysa inuu awoodi waayo inuu xinjiroobo. Sida la fahmi karo, tani waxay noqon kartaa mid aad khatar u ah haddii aan goor hore la ogaan.
Maaddaama ay u janjeeraan sameynta xaalado caafimaad oo daran, waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan inaad tixgeliso caymiska xayawaanka ee loo yaqaan 'Blue German Shepherd'.
Celcelis ahaan, waxay ku kacaysaa $ 20 USD bishiiba, ama qiyaastii $ 240 USD sanadkiiba si loo caymiyo eeygan.
Inkastoo magacooda , Eyga Buluugga ah ee loo yaqaan 'German German Shepherd Dog' wuxuu ku dhow yahay inuu ka madowyahay ama ka caww yahay buluugga!
Adhijirka Buluugga ah ee Buluugga ahi waa (sidaad u maleysay) buluug!
Sida lagu sharaxay heerkooda nooc , Waxay leeyihiin jidh adag oo muruqyo ah, oo leh madax qaloocsan, indho indheergarad ah, iyo dhego, saddex geesood toosan.
In kasta oo maqaalkani diiradda saarayo Blue GSD, haddana waxaa muhiim ah in la ogaado in eeygan lagu arki karo midabbo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan madow , madow iyo cagaar, cawl, beerka, jilicsan ama caddaan; kuwaas oo dhammaantood isku mid ka ah caafimaadka iyo dabeecadda.
Waxaa jira laba nooc oo ah jubbadaha Shepherd Jarmal:
Adhijirro timo dhaadheer leh waxay leeyihiin jaakad labalaab ah, taasoo la micno ah inay leeyihiin jaakad jilicsan oo khafiif ah, iyo jaakad ka sii dhumuc weyn.
Natiijada labbiska labadoodaba, German Shepherd Dog’s waa inaan la jarjarin maxaa yeelay tani waxay faragalin ku sameyn doontaa kuleylkooda.
Waa muhiim in la aqoonsado in eeyahaani aysan u baahnayn qubays joogto ah.
Qubayska isdabajoogga ah ayaa saliida ka xiiraya jaakada waxayna ka saaraysaa dhalaalka iyo sidoo kale qalajinta maqaarka. Maydhista saddexdii ama afartii biloodba mar ayey ku badnaan doontaa GSD.
Iyada oo ay taasi jirto, waxay u baahan doonaan is qurxin badan, gaar ahaan adhijirka reer Jarmal ee timaha dheer.
GSD gaaban oo timo gaaban ayaa u muuqda in ay daadiyaan wax badan maadaama aysan laheyn jaakad, sidaas darteed timahooda ayaa si toos ah u dhacaya. Isticmaal burush-ka-daadinta iyo raashin si aad ugu dhex caddeysid dharka hoose.
Cidiyaha waa in la jarjaro markii loo baahdo xirfadle, sida xanaaneeye ama dhakhtarka xoolaha.
Jacayl iyo Daacad, eeygan ma kuu noqon karaa eeyga adiga?
The Blue German Shepherd waa eey caan ah oo caan ah, mana aha wax adag in la arko sababta!
Si dhakhso ah karbaash, oo si aad ah loola qabsan karo, eeyahaani waxay wehel fiican u yihiin dadka ka socda dhammaan qaybaha nolosha.
Iyada oo wadida tamar sare leh iyo shuruudaha hagaajinta eeygan ayaa u baahan doona milkiile firfircoon oo isdaba joog ah oo waqti u huri kara eeygan.
Sida muuqaalka Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka laakiin ma hubo? Maxaad uga fiirsan la’dahay noocyo kale sida Malium-ka Belgian ?
Maxaad ka sameysaa eeyga quruxda badan ee buluugga ah ee buluugga ah?
Noogu reeb faallooyin adiga na siinaya fikirkaaga ku saabsan noocan hoose.
Shichon (Teddy Bear Dog) Macluumaadka Taranka
aussie shepherd cawl buluug buluug ah
Australiyaanka Shepherd shaybaarka isku darka daadinta
tan iyo beerka jarmal adhijir
Bichon frize iyo cavalier King Charles spaniel isku darka
Eeyga lo'da ee Australia iyo isku dhafka shaybaadhka
shaybaadhka dib u soo celinta Jarmal Shepherd mix